Ọ bụrụ na ị na-ele anya na nsonaazụ… ma gaa na ibe na ibe, ọ ga-egosi na Google na-etinye obere nlebara anya na saịtị buru ibu ma na-elebara obere saịtị anya. Ihe bụ nsogbu bụ na nsonaazụ m na-achọ bụ kpam kpam na-abụghị. Mightfọdụ nwere ike ịrụ ụka na Google enweghị ike ịghọta nghọta m… abụghị eziokwu. Gugul nwere otutu akuko kemgbe otutu ihe ichoro. Akụkọ ahụ ga-enye mbanye n'ime isiokwu m nwere mmasị ịchụso.
Nwelite Google na nso nso a, ma ama ya panda melite (akpọrọ onye nrụpụta), ekwesịrị ịkwalite ogo. Nsogbu a, dị ka ọtụtụ ndị SEO si kọwaa, bụ na ọ na-esiri ha ike ịlụ ọgụ ala ubi. Na eziokwu niile, ahụghị m ọtụtụ mkpesa sitere n'aka ndị ọrụ… mana Google pụtara na ọ gafere n'okpuru nsogbu nke ụlọ ọrụ ahụ.
Ọ bụrụ na obere saịtị ọdịnaya enweghị ike ịsọ mpi na saịtị buru ibu, m ghọtara. Ekwesịrị idozi ihe ọ bụla gbochiri ọchịchị onye kwuo uche ya. Ekwetaghị m na Google rụziri nsogbu ahụ n'ezie, n'agbanyeghị. Ọ dị m ka ọ bụ naanị na ha mere mpụta… ịkwụnye otu oghere ka ọgbụgba ndị ọzọ bidoro. Ihe ngbanwe nke algorithm mere ka oghom di nma - nnukwu saịtị nke nwere otutu ogugu di elu di ka o di mfe karie na ibe ohuru.
The ọzọ mbipụta, n'ezie, bụ ugbu a nnukwu saịtị na n'ezie nwere ọtụtụ nke ogo peeji nke… ma a obere pasent nke crappy peeji nke, ugbu a ama esịn n'usoro gafee osisi. Cheedị itinye ego na saịtị ma wuo ọtụtụ puku peeji nke ọdịnaya dị ukwuu, naanị iji chọpụta na n'abalị na saịtị gị dara ada n'ihi na ị nwekwara ụfọdụ peeji nke na-ata ahụhụ. Ihe ndapụta nke a na-efu ụfọdụ ụlọ ọrụ nnukwu oge.
Nke a blog nwere ihe karịrị 2,500 blog posts. O doro anya na ọ bụghị ha niile bụ klas "A". N'eziokwu, oke nke blọọgụ a anaghị atụnyere ọtụtụ ugbo ọdịnaya nwere ọtụtụ narị puku ma ọ bụ nde akwụkwọ. Otú ọ dị, m ka bụ ugbo… Na-agba mbọ iwulite ogo maka isiokwu dị iche iche dị mkpa maka ọchụchọ, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, mkpali na ahịa ahịa ndị ọzọ. Amachaghị m ụdị ọdịnaya m ga - eke tupu a hụ m dị ka ugbo ọdịnaya… ma taa ya ahụhụ maka ya I'm mana enweghị m obi anụrị maka ya.
Ihe nzuzo ochie na SEO abụghị ihe nzuzo. Dee ọdịnaya dị mkpa, jiri isiokwu gị rụọ ọrụ nke ọma, hazie peeji gị nke ọma, hazie saịtị gị ka ị nwee ike itinye ọdịnaya ahụ… ma kwalite heck na ya. Irè isiokwu ojiji na ọnyịnye ga-eme ka ị nweta ezigbo nsonaazụ promotion na nkwalite nke ọdịnaya ahụ na saịtị ga - eme ka ị bụrụ ọkwa ka mma. Ihe omuma ohuru amaghi n'ezie. Ndị anyị na ụlọ ọrụ ahụ ka na-agbasi mbọ ike ịghọta ihe ọ dị mkpa ka eme. Google hush-hush na ya, yabụ, yabụ anyị ji aka anyị.
Google mere kwesịrị ịgbanwe. Otú ọ dị, ọdịdị mgbanwe ahụ na enweghị ịdọ aka ná ntị ọ bụla na Google enweghị mkpa. Gini kpatara na Google agaghi acho ndi mmadu buru ibu aka na nti na enwere algorithm nke aga eme n’ime ubochi iri ato nke nyere ndi nkwuputa ugwo uto maka imeputa akwukwo ha nke oma. Gini mere gharile ngbanwe site na iji nchoputa ma obu sandbox. Opekempe ụlọ ọrụ enwere ike ịkwadebe maka nnukwu ọnụọgụ okporo ụzọ, gbasie mbọ ike n'ịzụ ahịa n'ịntanetị karịa, ma mezie ụfọdụ (ọ dị ezigbo mkpa).
Otu ihe atụ akọwapụtara bụ ndị ahịa m na-arụ ọrụ. Anyị na-ebido ugbua ozi email kacha mma, mkpanaka na njikọta mmekọrịta - yana nzaghachi nzaghachi ebe ndị na - agụ akwụkwọ nwere ike igosipụta ogo ọdịnaya ha na - agụ ka ọ ga - aka mma. Ọ bụrụ na anyị maara na a ga-enwe mmelite algorithm nke ga-ada 40% nke okporo ụzọ saịtị ahụ, anyị ga-arụsi ọrụ ike iji nweta atụmatụ ndị ahụ kama ịnwe n'ihu tweak saịtị ahụ. Ugbu a, anyị na-agba mbọ nwudo.